Heshiis laga gaaray xirmo $2 trillion ah oo lagu samata-bixinayo dhaqaalaha Mareykanka - Worldnews.com
Heshiis laga gaaray xirmo $2 trillion ah oo lagu samata-bixinayo dhaqaalaha Mareykanka
Senatorada Mareykanka iyo maamulka madaxweyne Trump ayaa heshiis ka gaaray sharciga xirmo dhaqaale oo dhaqaalaha Mareykanka looga samata-bixinayo saameynta xooggan ee uu ku yeeshay cudurka Coronavirus. ...
Aqalka Senate-ka Mareykanka ayaa ansixiyey sharciga xirmo dhaqaale ah oo ka kooban laba tirilyan oo dollar oo dhaqaalaha Mareykanka looga samata-bixinayo saameynta xooggan...
Coronavirus ma horseedi karaa in Iiraan ay isu dhiibto Mareykanka?
Waxaan wajaheynaa xasarado dhinaca caafimaadka dadweynaha ah, oo ka taagan guud ahaan caalamka, waxaana laga yaabaa inay yihiin kuwii ugu xumaa ee dunida soo maray muddo ka...
Dal malaayiin doolar oo deyn lagu leeyahay ah ku bixinayo lo'
Dowladda Chad ayaa billowday in ay lo' ku bixiso deyn gaaraysa 100 milyan oo doolar oo uu ku leedahay dalka Angola, sida uu sheegay wargeyska dowladda Angola. Heshiiska...
Germany: Wasiir is-dilay markii Coronavirus uu baa'biyey dhaqaalaha
BERLIN, Germany – Wasiirka Maaliyada ismaamul goboleedka Hesse ee waddanka Jarmalka ayaa is-dilay kadib markii uu "si qoto dheer uga murugooday" qaabka uu u xalin doono...
Gareowe Online 2020-03-31
Shiinaha iyo Mareykanka oo is-weydaarsaday hadallo kulul oo ku saabsan Coronavirus
BEIJING — Shiinaha iyo Mareykanka ayaa is-weydaarsaday hadallo kulul kadib markii Beijing ay ka carrootay in madaxweyne Trump uu cudurka Coronavirus ugu yeeray magac cusub oo ah “Fayruska Shiinaha.” “Dowladda Mareykanka waxay si awood leh u taageeri doontaa ganacsiyada, sida diyaaradaha iyo kuwa kale ee uu saameeyey Fayruska Shiinaha,” ayuu Trump ku yiri qoraal uu Isniintii soo...
Shiinaha oo caawimaad u yaboohay Mareykanka
Madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, oo uu taleefon kula hadlay Jimcaha, u sheegay in ay ka taageeri doonaan dagaalka Coronavirus, xilli Mareykanka uu qarka u saaran yahay inuu noqdo xudunta faafitaanka caalamiga ah ee cudurkan. Dalka Mareykanka ayaa iminka ah dalka laga xaqiijiyey kiisaska ugu badan Coronavirus ee caalamka, oo hadda kor u...
Midowga Yurub oo xuduudaha xirtay si Coronavirus loola dagaallamo
Midowga Yurub ayaa xayiraad socdaal oo 30 maalmood ah ku soo rogay dhammaan xuduudaha midowga yurub. Tallaabbada midowga yurub uu ku dhawaaqay ayaa la sheegay in la filayo inuu ka dhaqan galao 26 dal ee ka tirsan Midowga Yurub. Xayiraadda Midowga Yurub uu soo rogay ayaa ku soo beegmaya xilli ay sii kordheyso tirada dhimashada dalalka Talyaaniga, Spain iyo Faransiiska. Qaradda...
Cudurka Coronavirus ee safka ku socda ayaa gaaray dhammaan 50-ka gobol uu dalka Mareykanku ka kooban yahay, iyada oo gobolka West Vergina kiiski ugu horreeyey ee cudurka talaadadi laga helay. Marki shaaca laga qaadayey kiiska ugu horreeyeyna Barasaabka Wes Virginia Jim Justice wuxuu yiri: "waan ogeen iney tani imaneyso." Magaalada New York waxaa la saaray xayiraad la mid ah...
Coronavirus: Fashilka Mareykanka maxaa sabab u ah?
Wax ka badan labo bilood ayaa ka soo wareegatay markii kiiskii ugu horreeyay ee fayraska corona laga helay Mareykanka. Tan iyo wixii intaa ka dambeeyay, fayraska ayaa ku faafay gudaha dalkaas, iyadoo kiisaska guud ay kor u dhaafeen 200,000, halka tirada dhimashaduna ay gaartay 5,000. Mareykanka ayaa hadda ah xuddunta fayraska ee dunida, iyadoo tirada kiisaska dalkaasi ay ka...
Way iska caddahay in xilligan aysan wakhti wanaagsan u ahayn dunida iyo dalalka Mareykanka iyo Shiinaha. Madaxweyne Trump ayaa marar badan ku celceliyay in cudurkan hadda dunida dhibataada ku haya uu yahay "fayraska Shiinaha, halka wasiirkiisa arrimaha dibaddana, Mr Pompeo uu ku tilmaamay "feyraska Wuhan", arrintaas oo ka careysiisay xukuumadda Beijing. Madaxweynaha iyo...